Filtrer les éléments par date : samedi, 21 décembre 2019
samedi, 21 décembre 2019 14:09
Antsirabe: Manao tolo-tanana ny Kaominina ireo mpandraharaha manala ny fako
Vokatry ny fako be miavosa eran’Antsirabe dia niantso tolo-tanana tamin’ny vahoaka sy ny tsara sitra-po ny filohan’ny Delegasiona manokan’Antsirabe. Isan’ny namaly izany antso izany ireo mpandraharaha eo anivon’ny fikambanana Bira Mijoro, niaraka tamin’ny fikambanana FFPRO tarihin’Atoa Rakotozafy Freddy sy Dr Antonio, ity farany izay kandida ho solombavambahoaka an’ny IRD.
Nambaran’ny Dr Antonio fa « tsy ny fananana seza akory vao miasa fa na tsy manana andraikitra aza ny tenany dia vonona hifanome tanana amin’ny tompon’andraikitra eto Antsirabe ho an’ny fampandrosoana ny tanàna ».
samedi, 21 décembre 2019 13:41
Menabe: Novatsian’ny ministera masomboly ny tantsaha
Nomen’ny ministeran’ny fambolena sy fiompiana ary ny jono masomboly dimy kilao isanisany sy zezika folo kilao avy ny tantsaha ao Croisement Belo sy Ampandra, ka natolotra tamin’ny alalan’ny foibem-paritry ny fambolena sy fiompiana ary ny jono.
samedi, 21 décembre 2019 13:38
Antsirabe: Niampy ny fotodrafitrasan’ny Fitsarana ambaratonga voalohany
Notokanana ny zoma 20 desambra ny efitrano faharoan’ny Fitsarana ambaratonga voalohany eto Antsirabe. Efitrano Fitsarana efa nisy ihany izy ity saingy nasiana fanitarana sy fanavaozana ka izao vita soamantsara izao.
Nambaran’ny minisitry ny Fitsarana Randrianasolo Jacques, izay tonga nitokana ny fotodrafitrasa fa « ny tanjona dia ny fanafainganana ny fitsarana ka tsy hiverimberenan’ny olona manan-draharaha amin’izany ». Nantitrateriny fa « tsy handefitra mihitsy amin’ireo mpitsara manao tsirambina ny asany na voarohirohy amina heloka » ny tenany.
Tokony hirindra hoy izy ny fanadihadiana izay ataon’ny mpitandro filaminana, mba hisazy ireo meloka, satria miankina amin’ny fanadihadian’ny mpitandro filaminana ny didim-pitsarana.
samedi, 21 décembre 2019 13:02
Fitrandrahana ny harena ankibon'ny tany: Mampiahiahy ny firaisamonim-pirenena ny fanavaozana eo amin’ny lafin’ny lalàna
Nivoaka ny trano fivoriana momba ny " Forum de concertation sur le Code de Minier", notanterahina teny amin’ny MBC Ivato, omaly, ny mpikambana ny Vovonan’ny Firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fitrandrahana ny harena ankibon'ny tany (OSCIE). Nilaza izy ireo fa « mbola mitohy ny tsy mangarahara mikasika ny fomba hanavaozana ny lalàna (code minier) ».
samedi, 21 décembre 2019 12:43
Nosy-Be Hell-Ville: Hamokatra herinaratra ho an’ny Jirama ny orinasa Dera Energy
Natao ny zoma 20 desambra 2019 ny fifanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa hividianan’ny orinasa JIRAMA herinaratra azo avy amin’ny masoandro amin’ny kaompania kanadiana Dera Energy, hamatsiana ny tanànan’i Nosy-Be Hell-ville.
Afaka hamokatra 3 hatramin’ny 5 MW ny tobim-pamokarana any Nosy-Be Hell-Ville afaka heritaona. « 273,75 Ariary no hividianan’ny Jirama ny KWh ny herinaratra amin’ity orinasa kanadiana ity », hoy i Andriamanga Vonjy, Tale Jeneralin’ny Jirama.
samedi, 21 décembre 2019 12:35
Lalanan’ny fitantanam-bola 2020: Navoaka hanan-kery amin’ny didy hitsivolana
Didy hitsivolana no namohana ny Lalanan’ny fitantanam-bola ho an’ny taona 2020 rehefa nivezivezy sy nifanolanan’ny Antenimieram-pirenena sy ny Antenimierandoholona.
Nodinihina tamin’ny filankevitry ny minisitra farany teo izy io ary notazomina ny fanitsiana tokana nataon’ny solombavam-bahoaka dia ny hampihenana ho 10% ny tataon-ketra alaina amin’ny « bondillon » fanaovana savony raha toa ka 20% no voasoratra tao amin’ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibola.
Naverina amin’ny teo aloha, ka tazomina ihany aloha ny TVA amin’ny entona fandrehitra, gaz, raha nofoanana izy io tao amin’ilay volavolan-dalàna mifehy ny tetibola naroso teny amin’ny Antenimiera roa tonta.